As of Mon, 13 Jul, 2020 07:10
सोमवार, मंसिर २, २०७६
नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक शनिबारबाट ८३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकमा सरकार र सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । विगतमा सरकारी हस्तक्षेपसँगै संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा धराशायी बनेको बैंक बलियो बनेको छ । अन्य बैंकसरह प्रतिस्पर्धी सेवा दिन सक्षम रहेको बताउँछन् बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी । बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगै नैतिक बैंकिङका लागि नेतृत्व गर्ने उनले योजना सुनाए ।
२०६१ साल कात्तिक १६ नेपाल बैंकमा सहायक पदबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकारीले बैंकका विभिन्न विभाग हुँदै सहायक र निमित्त सिईओका रूपमा समेत नेतृत्व गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए उत्तीर्ण गरेका अधिकारीसँग नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रका साथै नेपाल बैंकबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :
वाणिज्य बैंकहरूबीच बिग मर्जरको विषय बहसमा छ । यसलाई सरकारको लगानी भएका बैंकहरूले कसरी लिएका छन् ?
नेपालमा बैंकहरूको संख्या बढी भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने विश्लेषणका बीच बिग मर्जरको विषय अगाडि आएको हो । सार्क राष्ट्रहरूमै बैंकको प्रतिशाखाले सेवा दिने सेवाग्राहीको संख्यामा नेपाल कमजोर छ । अझै ४० प्रतिशत नेपालीमाझ बैंकिङ पहुँच पुगेको छैन । त्यसैले बैंकको क्षमता विकास, सञ्चालन खर्च, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउनका लागि बैंकहरूबीच मर्जर आवश्यक छ । बैंकहरूले प्रविधिमा आधारित सेवा दिनुपर्ने र त्यसका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले पनि मर्जर आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई जोड दिएपछि दुईवटा बैंक वाणिज्य बैंक एक हुने क्रममा छन् । राष्ट्र बैंकले मागेअनुसार बैंकहरूले आफ्नो योजना बुझाएका छन् । हामीले पनि बुझाएका छौं । नेपाल बैंक अधिकांश सरकारको लगानी भएको बैंक भएकाले सरकारको निर्देशन हामीलाई आवश्यक हुन्छ । सरकारले निर्देशन नदिएसम्म हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।
तीनवटा सरकारी बैंकमध्ये कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको सेयर संरचना मिल्छ । सेयर संरचना मिले पनि व्यवसायको प्रकृति भने वाणिज्य बैंकसँग पनि मिल्छ । सरकारीबाहेकका निजी बैंकसँग पनि नेपाल बैंक मर्ज हुनसक्छ । तर यो विषयमा हामीलाई सरकारको निर्देशन आवश्यक छ ।
बैंकको व्यवस्थापन तहमा यसबारे छलफल भएको छैन ?
तीनवटा सरकारी बैंकका उच्च व्यवस्थापनबीच एक आपसमा मर्जरको सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छलफल भएको थियो । सबै सरकारी बैंक मर्जर भई एउटा बैंक बन्ने हो भने त्यो धेरै ठूलो बैंक हुन्छ । यसको आकार अरु ६–७ वटा बैंकसरह हुँदा अर्थतन्त्रका लागि समेत नकारात्मक हुन्छ कि भन्ने समेत छलफलल ग-यौं । सरकारी दुईवटा बैंकको मात्र मर्जर हुनु पनि अरू ४–५ वटा बैंक मिल्नुसरह नै हुन्छ । यो हाम्रो अनौपचारिक छलफल मात्र हो । यसका लागि तीनवटै बैंकलाई सरकारको निर्देशन आवश्यक हुन्छ ।
केही वर्षदेखि बैंकहरूले कर्जाको माग धान्न सकिरहेका छैनन् । बैंकहरूले यहींको स्रोत परिचालनबाट कर्जा माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था आउला ?
नेपालको अर्थ व्यवस्था गति लिन लागेको, विकास–निर्माणको कामले गति लिन लागेको हुनाले कर्जाको माग पुँजी निर्माणको तुलनामा उच्च छ । मागअनुसार कर्जा लगानी गर्न नसक्ने समस्या यो वर्ष पनि त्यो देखिएको छ । केही बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्र हेर्ने हो भने सीसीडी ७७–७८ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ ।
हरेक वर्ष दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा सीसीडी अनुपात माथि पुग्ने र चौथो त्रैमासिकमा केही सहज हुने देखिएको छ । यो वर्ष पनि त्यो समस्या देखिन थालेको छ । कर्जाको माग बढ्नु सकारात्मक पक्ष पनि हो । विकासोन्मुख देशमा त्यो हुनु पनि पर्छ, तर देशकै पुँजीले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने सम्भावना पनि कम छ । यसका लागि सरकारले विदेशबाट पुँजी ल्याउन वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल बैंकको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामीलाई समस्या छैन । बरु उल्टै केही बैंकको सीसीडी रेसियो मिलाउन सहयोग गर्ने अवस्थामा छौं । विगत वर्षहरूमा पनि सहयोग गरेका हौं । नियामकले कारबाही गर्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौं ।
हामी आज बिजनेस गरिहालौं, भोलिको अवस्था भोलि हेरौंला भनेर हामी काम गर्दैनौं । बैंकको अवस्था पनि हेर्नुप-यो । बैंकहरूले आफ्नो सक्षमता नहेरी अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा पनि समस्या भएको हो । कुनै एउटा बैंकले यस्तो लगानी गर्दा सबैलाई पनि समस्या हुन्छ । हामी हाम्रो क्षमताअनुसार योजना बनाएर मात्र अगाडि बढ्छौं । अर्को बैंकले धेरै लगानी गरेर समस्या भयो भने निक्षेप खोसाखोसको अवस्था आउँछ । बैंकहरू संयमित भएर व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कर्जाको माग पूरा गर्न बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सुविधा दिए पनि प्रभावकारी नहुनुको कारण के हो ?
विदेशबाट पुँजी ल्याउन त्यति सजिलो छैन । ऋण दिने संस्थाले देशको क्रेडिट रेटिङ र क्रेडिट हिस्ट्री हेर्छ । अहिलेसम्म हाम्रो देशको रेटिङ भएको अवस्था छैन । त्यो रेटिङ भएपछि अलि सजिलो होला । अर्कातर्फ बैंकहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर नेपाली पैसामा लगानी गर्न जोखिम धेरै हुन्छ । छोटो अवधिको ऋण ल्याएर लामो अवधिको कर्जामा लगानी गर्न पनि सकिँदैन । विदेशबाट ऋण ल्याउन हेजिङ सुविधाका साथै देशको रेटिङ र विश्वासिलो वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
बैंकहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएकाले पुँजी निर्माण हुन नसकेको आरोप छ नि ?
अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा गाडीलगायतको विलासी सामानको आयात, घरजग्गा र सेयर बजारको लगानी भनिन्छ । तर, यी क्षेत्रमा भएको लगानीले पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन काम त गरेकै छ । पूरै नकारात्मक हुन आवश्यक पनि छैन । बैंकले पनि जोखिमअनुसार लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा विविधीकरण गरेको हुन्छ । राज्यले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका हुन्छौं । नेपाल बैंकको त साना तथा मझौला उद्यममा प्राथमिकता दिएर लगानी गरेको छ । रियलस्टेटमा त राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम मात्र लगानी गरेका छौं ।
कृषिलगायत तोकिएका क्षेत्रमा तोकिएको लगानी नगर्ने तर पेनाल्टी तिर्न तयार हुने प्रवृत्ति छ नि ?
नेपालमा कृषि क्षेत्र पुरातन ढंगले चलिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी पु-याउन साढे २ खर्ब ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । पराम्परागत खेती प्रणाली आधुनिकीकरण नभएसम्म राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लगानी गर्न सकिँदैन । यसका लागि कृषिक्षेत्र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ । अहिले स–सानो ऋणका लागि मात्र माग आउँछ । यसबाट तोकिएको प्रतिशत लगानी पूरा हुँदैन । ठूलो–ठूलो स्केलमा कृषि आयोजना सञ्चालन गर्न जरुरी छ । बैंकहरूले किसानहरूलाई जागरण उत्पन्न गराएर काम गर्न आवश्यक छ । नेपाल बैंकको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामीलाई समस्या छैन । गाउँगाउँ पुगेका छौं । कृषि कर्जाको माग पनि छ । १० प्रतिशतभन्दा बढी नै लगानी गरेका छौं ।
सरकारले ब्याज सहुलियत दिएका कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लगानीमा कत्तिको दबाब छ ?
सरकारले घोषणा गरेका ७ वटा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम छन्, जसमा लगानी गर्न परियोजना विश्लेषण गर्ने अधिकार बैंकलाई नै दिएको छ । कतिपय ग्राहकले सरकारले ब्याज अनुदान दिएको छ, कुनै दिन ऋण मिनाहा पनि गर्छ कि भन्ने धारणा राखेर आएका हुन सक्छन् । तर, हामी कर्जा पूर्ण सदुपयोग हुने अवस्थामा मात्र दिन्छौं । बैंकबाट एउटा उद्देश्य देखाएर कर्जा लिने अनि अनुत्पादक अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या आउने हो । योजना राम्रो बनाएर कर्जा लिने अनि हात परेपछि मनलाग्दी खर्च गर्छु भनेर कोही ग्राहक आए पनि बैंकले एकैपटक पैसा लगानी गर्दैन । स्वीकृत ऋणबाट पनि किस्ता–किस्तामा रकम दिन्छौं । एक किस्ता लगेर काम नगरी थप लगानी गर्दैनौं । ऋण लगेर काम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराइदिन्छौं । परियोजनाको विश्लेषण, काम गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन हेर्छौं, त्यसपछि पैसा दिन्छौं ।
लामो समयदेखि बैंकहरूको ब्याजदर उच्च छ । अब फेरि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने सम्भावना छ कि छैन ?
अहिले ब्याजदर धेरै हदसम्म स्थिर छ । बैंकको आधार दर घटबढले पु-याउने असरबाहेक अन्य असर छैन । बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउनका लागि तँछाडमछाड छैन । बैंकर्स संघको भद्र सहमति पालना भएको छैन । तर, ऋण लगानी गर्ने पुँजीको अभाव भइरहेको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा घट्ने तत्काल देखिँदैन ।
यो वर्ष पनि कर्जा नपाएर हाहाकार हुने अवस्था आएको हो ?
५–६ वटा बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । ओभरलमा ७७–७८ प्रतिशत छन् । बजारमा त्यस्तो क्राइसिसको अवस्था हो भने नेपाल बैंक आउनुहोस्, हामी लगानी गर्छौं । हामी सहज अवस्थामा छौं ।
सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्न सकेको छैन । नेपाल बैंकले पनि आफ्नो भागमा परेको स्थानीय तहमा सेवा पु-याएको छैन त ?
स्थानीय तहमा शाखा पु-याउनका लागि हाम्रो भागमा परेकोमध्ये मनाङको नार्फु गाउँपालिकामा मात्र शाखा खोल्न बाँकी छ । त्यहाँ गाउँपालिकाको भवनसमेत नभएको र बैंकको ढुकुटी राख्ने घर पनि नभएको अवस्था छ । त्यहाँको जनसंख्या एकदमै कम, ६ महिनामात्र बसोबास गर्न सक्ने अवस्था छ । अहिले मनाङको चामेबाट सेवा दिइरहेका छौं । गाउँपालिकाले भवन निर्माण गरेर सेवा सुरु गरेमा हामी त्यही काउन्टर राखेर सेवा दिन्छौं ।
द्वन्द्वकालमा विस्थापित शाखा पनि पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् ।
द्वन्द्वकाल अगाडि बैंकका २ सयभन्दा बढी शाखा थिए । अहिले १ सय ६७ वटा शाखा छन् । वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा थप ९ वटा शाखा थप भएको छ । अहिले ६२ जिल्लामा रहेको कभरेज ७७ वटै जिल्लामा पु-याउनका लागि काम गरिरहेको छ । विस्थापित शाखा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पुनःस्थापित गर्छौं ।
नेपाल बैंक पनि नाफामा मात्र केन्द्रित भएको हो ?
बैंक नाफामूलक संस्था हो । सेयरधनीलाई प्रतिफल पनि दिनुप-यो । तर, हामी नाफामा मात्र केन्द्रित छैनौं । सेवा पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै हो । उचित प्रतिफल गर्नैपर्ने हुन्छ । नाफा नहुने ठाउँमा गएकै छैनौं भन्ने पनि होइन । राज्यप्रति दायित्व छ, विकट ठाउँमा पनि शाखा छन्, जसमा लामो समयदेखि घाटा पनि छ । अब जाँदा सेवाको भावसँगै बैंक दिगो हुनका लागि केही वर्ष घाटा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कमाउन सकिने ठाउँ हो भन्ने ढंगले हेर्छाैं ।
बैंकमा लामो समय सेवा गर्दै व्यवस्थापनको नेतृत्वमा आइपुग्नुभएको छ । यसका चुनौती र अवसर के–के देख्नुभएको छ ?
नेपाल बैंकमा १६ वर्ष काम गरेको हिसाबले बैंकको हरेक पक्षबारे मलाई जानकारी छ । बैंक पुरानो संस्कारलाई परिवर्तन गरेर नयाँ संस्कारमा प्रवेश गरिसकेको छ । बैंक अहिले बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी, सक्षम समूह र कर्मचारीबाट सञ्चालित छ । बैंकमा २०६१ सालभन्दा अगाडिका कर्मचारीहरू करिब–करिब सेवा निवृत्त हुनुभएको छ । बजारका उत्कृष्ट युवा जनशक्ति बैंकसँग छ । सरकार र सर्वसाधारणको लगानी भएको नेपालको पहिलो बैंक हो । देशको नामसँग पनि जोडिएका छौं । बैंकका प्रोडक्ट प्रायः एकै खालको हो । त्यसमा पनि हामी उत्कृष्ट ठहरिने भनेर ग्राहकमैत्री भएर सेवा दिइरहेका छौं । पछिल्लो समय बैंकप्रति आकर्षण बढ्दो छ । ५० को दशमा बैंकको छवि धुमिल भयो । त्यसलाई रिकभर गरेका छौं । अब फेरि त्यो छवि बिग्रन नदिई थप माथि लैलानका लागि हामी लागिरहेका छौं ।
सर्वसाधारणको दृष्टिकोण पनि सरकारी निकायहरूमा काम ढिलासुस्ती हुन्छ, सोर्सफोर्स चल्छ भन्ने आमबुझाइ छ । यसमा पनि सरकारी बैंक भन्ने ट्याग लागेकाले गलत बुझाइ अझै बजारमा छ । त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ । नेपाल बैंकले वित्तीय पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन, वित्तीय सुशासन पालना गर्दै उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्छौं ।
लगानीकर्ताको लामो समयदेखि प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् नि ?
५० को दशकमा वित्तीय अनुशासन खस्केका कारण नेपाल बैंकको आर्थिक अवस्था बिग्रियो । त्यसलाई सुधार्नका लागि विदेशी व्यवस्थापन ल्याएर काम भयो । त्यसको फलस्वरूप बैंक अहिले एउटा सही दिशामा अगाडि बढेको छ । कुनै बेला १०–११ अर्ब नेगेटिभ नेटवर्थ भएको बैंक त्यसलाई सुधार गरेर ३० अर्ब नेटवर्थ भएको बैंक बनेको छ । अब हाम्रा सेयरधनीले केही दिन नसके पनि अपार विश्वास छ । नेपाल बैंकको सम्पत्ति अथाह छ, त्यसको मालिक आफैं हो भनेर धैर्य भएर बस्नुभएको छ । अब हामी त्यो धैर्यतालाई चिर्न सक्छौैं । बैंक सक्षम भएको छ । बैंक स्वस्थ हुँदै आएको छ ।
बैंकको खराब कर्जा अझैं बढी छ त ?
कुनै बेला ६० प्रतिशतसम्म खराब कर्जा पुगेको बैंकको अहिले घट्दै चालू आवको प्रथम चौमासिकसम्म आउँदा २.७४ प्रतिशतमा झरेको छ । यो त्यतिधेरै होइन । निरन्तर रूपमा घटाउन प्रयास गरिरहेका छौं । हाम्रा पहिलादेखि कारोबार र पुरानो कर्जा ग्राहकहरू रहेकोमा खराब कर्जा बढी देखिएको हो । यसलाई घटाउन निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौं । आगामी वर्षमा २.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।
तपाईंको कार्यकालका योजनाहरू के–के छन् ?
बैंकभित्र केही सुधार गर्न आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ प्रविधिमा आधारित हो । हाम्रो सेवालाई अझ अपडेट गर्ने दिशातर्फ लाग्छौं । व्यवसाय क्रमशः बढाउँदै जान्छौं । प्रत्येक वर्ष २० कर्जा र २५ निक्षेपमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य छ । बैंकको साखलाई अझ वृद्धि गर्न हाम्रो कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्छौं ।
मैले कार्यबाहक सिईओका रूपमा काम सुरु गरेदेखि १५–१६ वटा आन्तरिक नीति परिवर्तन गरिसकेका छौं । यसबाट बैंकको सेवा प्रवाह चुस्त हुन्छ, कर्मचारीको मनोबल वृद्धि हुन्छ । कारोबार, नाफालगायतको -याङ्किङमा हामी पछि परौंला तर व्यावसायिक विकाससँगै नैतिक बैंकिङका लागि नेपाल बैंकबाट सिक्नुपर्छ भन्ने छाप छोड्ने गरी नेतृत्व गर्छौं ।
एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकालाई सहयोग गरिरहेका छौं
सिभिल मलका व्यवसायी धर्नामा
निगमका ५८ उद्धार उडानमार्फत १० हजार ९१२ जना स्वदेश फिर्ता
नबिल बैंकको नबिल डिजी बैंकको सुरुवात
सनराइज बैंकको डिजिटल माध्यमबाट चार शाखा विस्तार
बफेटलाई पछि पार्दै मुकेश अम्बानी बने विश्वकै सातौ धनी
हिमाली क्षेत्रमै कुहियो करोडौं मूल्यका यार्सागुम्बा